Ihowuliseyili ifakelwe Bit mveliso kunye nabathengisi | NzuluFast
NO.166 Kangping Road, Isithili saseGaixin Chengdu, kwiPhondo laseSichuan, PR China
Ezinye izixhobo zokomba
Amanqanaba amabini kunye neZantya ezibini ...
Umzimba weMatrix PDC Drill Bit
Umzimba weMatrix PDC Core Bit
Isakhelo esingaphakathi sekhoni: Isigaxa sangaphakathi sesuntswana samkela ubume bejometri eyodwa kunye nolwakhiwo, oluphucula ukusebenza kokucheba kwenxalenye esembindini yesuntswana kunye nokwandisa ubomi bebonke.
Uyilo lwe-ROP ephezulu xa kusombiwa ubunzulu kunye nobunzima, i-PDC yokomba isoloko iqhelana ukusuka emhlabeni ukuya ezantsi ngokuthe ngqo nangaphantsi okanye kwinto enye, ukugcina ixesha kunye neendleko.
Umahluko kwi-tricone bit, i-PDC drill bit ibaleka nge-WOB esezantsi kodwa i-RPM ePhakamileyo, ke ihlala isebenza ngeemoto ezantsi ukuya kwisantya esijikelezayo.
Ukusebenza kwe-PDC drill bit kuxhomekeke kakhulu kubasiki be-PDC, sinika isisombululo esikhethekileyo kwiimfuno ezithile kulwakhiwo olwahlukeneyo.
I-Diamond Bit efakelweyo ine-blade ye-cylindrical toothed blade ene-ROP ephezulu kulwakhiwo olunzima nolomeleleyo lweplastikhi yokunxibelelana.
Uyilo ekujoliswe kulo:Inoyilo olukhethekileyo lokucinezela okuphezulu kunye nokubumba okungafunekiyo. Ilungele i-denser shale kunye ne-argillaceous s kunye nelitye, kwaye ii-quartz kunye nelitye elinoburhabaxa obuphezulu, ilitye lodaka kunye nelitye lesanti elungelelanisiweyo kufanelekile.
Ulwakhiwo olwahlukileyo lwangaphakathi I-geometry ekhethekileyo kunye nolungelelwaniso lwangaphakathi lwe-drill bit luphucula ukusebenza kokusika kwiziko le-drill bit ukwandisa ubomi bonke be-drill bit.
Ifomula eyahlukileyo yematriki: Ifomula yomgubo we-matrix onamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nobuchwephesha bokucoca phambili obwenziweyo benze ukuba iipropathi zoomatshini zifike kwinqanaba eliphezulu lehlabathi.
Uyilo lwejelo elibanzi nelinzulu lokuhamba: Umjelo wobubanzi obubanzi kunye nobunzulu bokuhamba okunenzuzo kuluncedo ekucoceni nasekuhambiseni izithole kunye nokuthintela ibhola encinci.
1.Uhlobo olulodwa lwangaphakathi lwecone: I-cone yangaphakathi yesuntswana yamkela ubume bejometri eyodwa kunye nolwakhiwo, oluphucula ukusebenza kokucheba kwenxalenye esembindini yesuntswana kunye nokwandisa ubomi bebonke.
2.Wide kwaye uyile imbaleki: I-Radial ebanzi kunye neimbaleki ezinzulu, eziluncedo ekucoceni nasekuhambeni kweentsimbi kwaye kuthintela ukombela ngodaka.
3.Ulondolozo lobubanzi bezitali: Ukolulwa kokujikeleza kunye nobubanzi kulondolozo lwendawo yokususa i-chip enzulu kunye noyilo lwamazinyo okusika ngomngxunya ongasemva onokubuyiselwa.
1. I-Matrix exutywe namacandelo edayimani ngummiselo owahlukileyo wokutshatisa ukwakheka, okwandisa umda wokusika wedayimane, amandla wokubambelela kunye nokunxiba ukumelana nokufumana i-ROP engcono.
2. Owona Mbane uQinisekileyo
Uyilo ngalunye olufakelweyo luphantsi kovavanyo olunamandla lokubala kwamanzi ukuqinisekisa ukuba ukuphinda kugaywe kwaye kusasazwe kwakhona ukusikwa kuyasuswa.
Isuntswana lethu elikhulelweyo liyakwazi ukubhola iifom ukusuka kwithambile ukuya kunzima.
3.Iibits babe maleko edityanisiweyo yenziwe imixube ekhethekileyo idayimani olungumgubo ubukhulu ezahlukeneyo kunye ingxubevange. Ukubunjwa komxube kungayilwa ukubhola ngeendlela ezahlukeneyo.
I-Bit ekhulelweyo yayinokusebenza okuphezulu kweTurbine Xiwang Oilfield
Iibhithi eziqhelekileyo ze-PDC kunye neTricone
Iibits azikwazi ukwenza umsebenzi omkhulu kulwakhiwo olunzima kakhulu ngelixa iLimestone kunye neDolomites
Ukuze ufezekise ukusebenza kakuhle, uyilo oluqinileyo luqinisile i-Bit 8 1/2 "DI705 yokufaka isicelo se-turbine.
Ngomfanekiso oqokelelweyo we-103. Ixesha lilonke limalunga neeyure ezingama-37. 5, kunye neROP yi-2.75.
Kwi-Xiwang Oilfield e-China, ukuyilwa kunzima kakhulu okuyikalika / iidolomites kunye namandla e-compress yi-24000PSI -32000PSI. Umqhubi uyafuneka ukuba abumbe umngxunya oyi 8 1/2 ”nge turbine. I-PDC Bit yesiqhelo okanye i-Tricone Bit ayenzi kakuhle kwelo candelo. Ngokusekwe kule meko, i-Deefast ibonelela ngokuqiniswa kweBit ekhulelweyo (8 1/2 ”DI705) ukufaka i-turbine kunye nokufezekisa iinjongo ezinkulu.
+ Φ168.3mm Turbine x 11.54m
+ Φ214mm IStabilizer x 1.79m
Uxinzelelo lokomba / Ubunzima kwiBit 40-50KN
Isantya seRotary 65 RPM
Umgangatho wohambo 29L / S
Uxinzelelo lwempompo 15 mpha
I-Bit ekhulelweyo (8 1/2 "D1705) yinto entsha eyenzelwe ngokukodwa ukulungelelanisa i-turbine kunye nokubumba okunzima.
Ngobume be-cone yangaphakathi eyomeleleyo kunye nokomelezwa komzimba we-matrix, kuphucule ukomelela kunye nozinzo lokomba kwi-lithology esirhabaxa. Ngomfanekiso oqokelelweyo we-103, ixesha lilonke li malunga neeyure ezingama-37.5, kwaye i-ROP yi-2.75 yemitha / ngeyure. Umthengi wanelisekile ngokusebenza kwayo kwaye unceda ukugcina i-30% yexesha kunye ne-50% yexabiso xa kuthelekiswa nesisombululo sangaphambili.
Egqithileyo I-Drill Bit ekhulelweyo
Okulandelayo: Umzimba wentsimbi i-PDC Bi-center Drill Bit
Qhuba Abavelisi beBit
Abaqhubi be-Drill Bit
Iibhidi zePDc zokuqhuba
Ixabiso leTricone Drill
Umzimba wentsimbi i-PDC Drill Bit
Uluhlu lwee-PDC Bits
I-Drill Bit ekhulelweyo
Siyavuyisana no-Meyi 1 ...
ngomphathi ku 21-04-30
I-Sichuan DeepFast ye-oyile yokugrumba nayo ...
ngomphathi ku 21-04-28
© Copyright - 2019-2021: Onke amalungelo agciniwe.